Idi Onye nrụpụta kacha mma na onye nrụpụta iko na ụlọ ọrụ |Tongli
A na-eji ndị na-emegharị Tongli nwere iko mmiri n'ọtụtụ ebe maka njikwa na-adịghị emebi emebi nke efere dị iche iche, gụnyere efere na-eguzogide corrosion, efere aluminom, efere titanium, akụkụ mejupụtara, wdg.
A na-ejikwa ha n'ọtụtụ ebe maka igwe ịcha ọkụ laser, igwe na-egbutu plasma, igwe na-egbutu mmiri jet, igwe njikwa ọnụọgụ, wdg.
The akụrụngwa suction cup mere nke aluminom nkedo na otu oge elu-nrụgide anwụ-nkedo ịkpụzi, nwere àgwà nke ìhè arọ, elu ike, detachable suction cup roba, mfe dochie, gburugburu ebe obibi enyi na enyi na-enwe elu na-eri-irè.
Sistemụ pneumatic dị ọcha ọhụrụ, ọ dịghị mkpa ijikọ ọkụ eletrik, enweghị ụgwọ, ibuli pneumatic, mgbasa ozi pneumatic, akụ na ụba na ọdabara.
Enwere ike imezi ọnọdụ onye na-aṅụ mmanya iji zute mgbanwe akụkụ nke efere dị iche iche.
Ndị na-eji iko mmiri ara ehi dị mma n'ịjide ihe ndị dị larịị na elu mgbe niile, ya mere a na-eji ya na ngwa agha, mmepụta na nhazi, ụlọ ọrụ nri, mmepụta ụgbọ ala, njikwa iko, njikwa mpempe akwụkwọ na ubi ndị ọzọ, ọnụ ọgụgụ na ụdị ha bụ nke kachasị ukwuu. na-ejide manipulators.
Ka anyị kewaa dịka ebumnobi anyị ji achọpụta ma leba anya na ngwa nke manipulator iko mmanya:
A na-ejikarị ya ebuli na ibufe ihe dị arọ.
Dị ka mkpokọ katọn na ịchịkọta ngwugwu na ụlọ ọrụ lọjistik;
Dị ka ibuli na ijide akụkụ na ngwaahịa na ụlọ ọrụ igwe na kemịkalụ;
Dị ka iko, mpempe akwụkwọ akụkụ grabbing na ịtụgharị;
Dị ka mbufe na njikwa ụgbọ elu ọdụ ụgbọ elu;
Dị ka nkwalite na ịnyefe akụkụ buru ibu.
Ndị na-emegharị ihe ndị a dị mfe na nhazi.Ọtụtụ n'ime ha bụ ogwe aka na-agbanwe agbanwe nwere iko mmiri ara.Ha na-enweta ihe ndị a họpụtara site na ọrụ mmadụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị usoro nchịkwa.Ọnụ ego ahụ dị ọnụ ala, ngwa ahụ dịkwa ebe niile.Ọ kachasị iji dochie njikwa aka na ibuli ihe dị arọ.
Igwe na-agbagwoju anya dịtụ mgbagwoju anya nke nwere obere ogo nnwere onwe nwere ike ịghọta ntụgharị nke ihe ndị ahụ ejidere.
2. Palletizing akpaaka
A na-ejikarị ya na ngwa ngwa, nkwakọba ihe, na ọdụ ụgbọ mmiri.A na-eji ya maka ijide ihe na akpaghị aka yana ọrụ ndokọba ihe.
Dịka ọmụmaatụ, nhazi na palletizing na ụlọ ọrụ lọjistik na ụlọ ọrụ mmepụta ihe;
Dịka ọmụmaatụ, nchekwa, nchekwa nke ngwaahịa na ọdụ ụgbọ mmiri;
Ụdị onye na-emegharị ihe a nwere ogwe aka rọbọt nke nwere ike ịgagharị na-akpaghị aka, mana ọtụtụ n'ime ha nwere nnwere onwe dị ala ma na-enweta mmegharị ahụ dịtụ mfe.Izi ezi ọnọdụ ọnọdụ adịghị elu, mmemme na usoro njikwa dịtụ mfe, na onye na-eme ihe abụghị ngwaọrụ ziri ezi.
T3.Ejide na nkesa nke ọma
N'akụkụ ụfọdụ, a na-achọrọ ndị na-emegharị ihe ka ha nweta nke ọma ịghọta na idobe ihe ndị dị ka nri, ụlọ ọrụ ọgwụ na eletrọnịkị.Ụlọ ọrụ ndị a nwere nnukwu ihe a chọrọ maka ịdị ọcha, a na-ejikwa ndị na-eji iko iko eme ihe n'ọtụtụ ebe.Iji nweta ọkwa ziri ezi, a na-ejikarị ogwe aka rọbọt nwere ogo ogo nnwere onwe.
Ogo nnwere onwe nke onye na-emegharị ihe, usoro ahụ dịkwa ọtụtụ na iche iche.
Onye na-eme ihe nke iko iko manipulator bụ iko mmiri mmiri, nke nwere ike ịghọta ọtụtụ ihe.Iko mmiri na-ekpo ọkụ nwere ike ịmị mmiri dị elu ma dị ọcha yana ịdị ọcha.Ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị chọrọ ịdị ọcha masịrị ya.Enwere ike ịkwado manipulator nwere ụdị na nhazi dị iche iche.Ọ nwere ike ịbụ ogwe aka na-agbanwe agbanwe nke mmadụ na-achịkwaghị achịkwa, onye na-eme ihe nrịbama nke nnwere onwe dị ala, ma ọ bụ onye na-eme ihe ngbanwe dị elu nke nnwere onwe.Nkwekọrịta ahụ na-agbanwe karịa.Dabere na uru nke onye na-ahụ maka iko mmiri ara, ụdị onye na-eme ihe na-akpata oke oke nke ahịa ndị na-emegharị ahụ.
Nke gara aga: Onye na-emegharị ihe na mgbachi
Osote: kreenụ dabara adaba
Onye na-ahụ maka iko mmiri ara
Iko Vacuum Maka ebuli